विश्वकप Archives - NepaliGoal.com
Home » Tag Archives: विश्वकप
Tag Archives: विश्वकप
मोरक्कोविरुद्व पोर्चुगलको जितः रोनाल्डोको गोल नै निर्णायक
जुन 20, 20180382
काठमाडौं । रुस विश्वकपअन्तर्गत समूहगत चरणको आजको आफ्नो पहिलो खेलमा मोरक्कोविरुद्व पोर्चुगल १–० गोलले विजयी बनेको छ । खेलको ४ औं मिनेटमा कप्तान समेत रहेका पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले हेडमार्फत गोल गरेका थिए । रोनाल्डोले गरेको उक्त गोल नै निर्णायक बन्यो । मोरक्को अन्तिम खेल अगाडि नै विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ । मोरक्कोविरुद्व पहिलो गोलसँगै स्टार खेलाडी रोनाल्डोले एउटा नयाँ …
डिसेम्बर 1, 20170805
रुसमा आयोजना हुने विश्वकप फुटबल २०१८को ड्र सार्वजनिक भएको छ। ड्र शुक्रबार रुसको राजधानीमा रहेको क्रेमलिन प्यालेसमा एक भब्य समारोहकाबीच सार्वजनिक भएको हो । विश्वकप खेल्ने ३२ टोलीलाई ८ समूहमा विभाजन गरिएको छ । हरेक समूहका विजेता र उपविजेता प्रिक्वाटरफाइनलमा पुग्नेछन् । युरोकप विजेता पोर्चुगल र स्पेनसँगै मोरक्को र इरान एउटै समूहमा परेका छन् भने अर्जेन्टिना रहेको समूह डीमा आइसल्याण्ड, …
स्वीडेनसँग हर्दा इटालीको विश्वकप यात्रा धरापमा परेको छ
नोभेम्बर 11, 20170542
विश्वकप छनौट अन्तर्गत शुक्रबार राति भएको स्वीडेन र इटाली बीचको प्ले–अफ खेलको पहिलो लेगमा इटाली स्वीडेनसँग १–० ले पराजित भएको छ। पराजय संगै इटाली आउँदो वर्ष रुसमा हुने विश्वकप फुटबल खेल्ने सम्भावना निम्न हुदै गएको छ। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा स्वीडेनले पहिलो हाफमा इटालीलाई गोलरहित बराबरीमा रोकेको थियो । तर दोस्रो हाफमा भ्रमण टोली इटालीले गोल खायो । स्वीडेनको लागि …
विश्वकप फुटबल २०१८ का लागि यस्ता बन्दैछन् रंगशाला
नोभेम्बर 3, 20170897
काठमाडौं । आगामी वर्ष रसियामा विश्वकप आयोजना हुँदैछ । विश्वकप नजिकिँदै गर्दा सुरक्षाको विषय पनि तीव्रताका साथ उठिरहेको हुन्छ । विभिन्न कुराहरू सञ्चारमाध्यममा आईरहेको बेला विश्वकप आयोजना हुने रंगशालाको अवस्था कस्तो छ त ? रसियाले विश्वकपको लागि रंगशालाको तयारी कसरी गरिरहेको छ र कति दर्शक क्षमता तथा कस्तो प्रविधियुक्त मैदान बन्दैछ ? यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । सन् २०१८ …
विश्वकपमा अझै को–को छनौट हुने सम्भावना छ ?
अक्टोबर 11, 201707,792
काठमाडौँ । अर्जेन्टिना र पानामा लगायत टोलीले पछिल्लो समय विश्वकपमा स्थान बनाएको छ । तर, अझै कुन–कुन टोलीको सम्भावना रहेको छ ? अहिलेसम्म ३२ मध्ये २३ वटा टोलीले रसियामा खेल्ने सुनिश्चित भएका छन् । को–को भए छनौट ? प्रतियोगितामा ३२ वटा टोलीले भाग लिनेछन् । आयोजकका रुपमा रसिया पहिलेनै छनौट भएपछि बाँकी ३१ स्थानका लागि छनौट खेलहरु भएका छन् । …
२८ वर्षपछि इजिप्ट विश्वकप खेल्दै, कंगोलाई २–१ गोलले हरायो
अक्टोबर 9, 20170527
विश्वकप छनौट अन्तर्गत आइतबार राति अफ्रिकी क्षेत्रको समूह ‘ई’ को खेलमा इजिप्टले कंगो विरुद्ध २–१ गोलको जित निकालेको छ। जित संगै २०१८ मा रुसमा हुने विश्वकप फुटबलमा आफ्नो स्थान पक्का गरेको छ । मोहम्मद सालह एक्लैले २ गोल गर्दै २८ वर्षपछि इजिप्टलाई फेरि विश्वकपको यात्रा तय गराए। पहिलो हाफमा गोल रहित बराबरी भएको खेलमा ६३ औं मिनेटमा सालहले गोल गोल …
विश्वकप हेर्न विशेष परिचय पत्र चाहिने भयाे
मार्च 3, 201702,233
रसियामा हुने सन् २०१८ को विश्वकप हेर्न समर्थकहरुलाई विशेष परिचय पत्र चाहिने भएको छ । युरो कप २०१६ मा बेलायत र रसिया काे फुटबल समर्थकबीच मार्सेलिएमा झडप भएको थियो । अब हुने विश्वकपमा भने रुसले विशेष परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न लागेको छ, जुन रंगशाला प्रवेश गर्न अनिर्वाय बनाइनेछ । साथै यसलाई विश्वकपका लागि रुस जाने भिसाका रुपमा समेत प्रयोग गरिनेछ …